गण्डकी प्रदेश – ताजा समाचार
राति बाइकमा घरबाट हिँडेका निमराज बिहान मृ त भेटिए
पोखरा २६ लेखनाथ, सुन्दरीबजारबाट ३८ वर्षीय निमराज पुन बुधबार राति साढे ९ बजेतिर घरबाट निस्किए। ग ११ प ८२८१ नम्बरको बुलेट मोटरसाइकलमा निस्कएका निमराज राति कहाँ कहाँ डुले अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। बिहिबार विबिन पोखराको चाउथेमा उनको श-व भेटियो । कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार केसीका अनुसार, उनको श-व र मोटरसाइकल सडकसँगैको कुलोमा भेटिएको छ। […]
कोरोना प्रभाव : तातोपानी कुण्ड बन्द
सन्तोष गौतम बेनी : विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट जोगिन म्याग्दीका तातोपानी कुण्डमा स्नानका लागि बन्द गरिने भएको छ । प्राकृतिक चिकित्सालयको रुपमा परिचित बेनी नगरपालिका -४ को सिंगा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले आगामी शनिबारदेखि बन्द गराउने निर्णय गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अन्य तातोपानी कुण्डहरु पनि बन्द गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई बुधबार […]
गोरखामा ४० विद्यार्थी बि’रामी, रुघाँखोकी संगै घाँटी र छात्ती दु’ख्ने
ताजा समाचार । २२ फाल्गुन, गोरखा : गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–२ खरिबोटको प्रभा माध्यमिक विद्यालयका ४० भन्दा बढी विद्यार्थीमा भाइरल ज्वरोको सं’क्रमण देखिएको छ । उनीहरुमा रुघा लाग्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता स’मस्या देखिएको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र राज धितालले बताए । प्रधानाध्यापक धितालका अनुसार कक्षा ६-८ का विद्यार्थीमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । […]
ताजा समाचार । २२ फाल्गुन काठमाडौं : सुुक्खा पहिराका कारण अवरुद्ध बनेको बेनी–जोमसोम सडक तीन दिनपछि आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउपालिका वडा नं ३ र ४ को सिमानामा पर्ने धैकु खोला नजिकै सोमबार दिउँसो सुक्खा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको थियो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका […]
बेनी–जोमसोम सडकमा पहिरोले चालकलाई पु’र्यो
￼ पोखरा , बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा सुक्खा पहिरो जाँदा एउटा स्काभेटर पु’रिएको छ । स्काभेटर पु’रिँदा त्यसका चालक अर्जुन दाहालको नि’धन भएको छ । घ’टना अपराह्न साढे ४ बजेको हो । सडकखण्डको थासाङ गाउँपालिका ४ घाँ’सामा उक्त निर्माण भइरहेको थियो । सोही सडक निर्माणको क्रममा माथिबाट खसेको सुख्खा पहिरोले स्काभेटर सहित चालकलाई पु’रेको थियो । थप जानकारी […]
उदारणीय बिहे ************ बिहेमा कुनै गरगहना नलगाई बागलुङकी तारा शर्मा ले बिहे गर्नु भएको छ । बैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना हजुरहरुलाई,नारीको सुन्दर स्वरुप नारी आफैमा हुन्छ नाकी गरगहनामा?? -Facebook बाट सभार गरिएको यो ८० हजार तोला सुन पुगेको बेला गहना नलगाई बिहे गर्नु अति उत्तम ! संमान छ यो जोडिलाइ!!?? मागी बिहे गर्न नसक्ने […]
एक वर्षदेखि राजमार्ग छेउमा रोकिएको यो ट्रक खोज्न किन कोही आएनन ?
भवानी अधिकारी एउटा मालबाहक ट्रक राजमार्ग छेवैमा राखिएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ। सिद्धार्थ राजगार्ग अन्र्तगत पुतलीबजार नगरपालिका ११ सुम्रेखोलाको घुम्तिमा विपरित दिशातर्फ फर्काएर राखिएको सो ट्रकको आजसम्म कसैले खोजी गरेको भेटिँदैन्। यो ट्रक आजका दिनसम्म पनि कसैले नखोजेको स्थानीयबासी बताउँछन्। ‘न त, कोही आएर सोंधखोज गरेका छन्। न कुनै सरकारी निकायले यसतर्फ चासो […]
पर्वत : नेपाल सरकारले सन २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइरहँदा यसमा एउटा इँटा थप्ने आशा गरिएको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पर्वत र बागलुङ जिल्लालाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल मानिएको छ । ५ सय ६७ मिटर लम्बाई र १ सय २२ मिटरको उचाइमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-१ पाङको अदुवा बारी र बागलुङको बागलुङ नगरपालिका १ रामरेखा जोड्ने गरी […]
ट्याक्टर दुर्घटना तीनको मृ-त्यु
बागलुङ जिल्लाको तमाखोला गाउँपालिकामा आज साँझ भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा तीन जनाको मृ-त्यु भएको छ । ग १ त ५७६२ नम्बरको ट्याक्टर तमानखोला–३ को बुलबुलेमा दुर्घटना हुँदा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीया रीता पुन, ५२ वर्षीया मनकुमारी पुन र ५७ वर्षीय ओमप्रकाश पुनको मृ-त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घट-नाग्रस्त ट्याक्टर म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाबाट तमानखोला […]